विदेशभन्दा स्वदेशमा राम्रो कमाइ : अटो चलाक
सिरहा/ पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका सिरहा जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. ६ का राजेश्वर साह अहिले मिर्चैयामा अटो चलाउँछन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै विदेश गएका उनी लामो समय देशबाहिर रहे ।
त्यहाँको कमाइले घरको कमजोर आर्थिक अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएपछि दोहो¥याएर विदेश नजाने निष्कर्षमा पुगे, करिब ५ लाख लगानी गरेर अटो खरिद गरे र आफै चलाए । उनी अहिले सदरमुकाम आसपासका ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत लक्ष्य गरी अटोमा यात्रु बोक्छन् ।
मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. ६ का राजेश्वर साह ५ वर्ष मलेसिया बसे । जोखिमपूर्ण काम गर्दा कतिबेला मृत्युको मुखमा पुगिने हो भन्ने त्रासका बीच ५ वर्षको मलेसिया बसाइलाई छोडेर अहिले उनले यहाँ आफ्नै गाउँमा उनले अटो किनेर चलाउन शुरु गरे । विदेशमा कमाएको पैसाले नपुगेपछि ऋण लिए र ५ लाखमा अटो खरिद गरे । उनी अहिले सदरमुकाम र आसपासका बजार क्षेत्रमा अटो चलाउने गर्छन् ।
यो पेशाबाट दैनिक ५ सयदेखि १ हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको अटो व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक १ हजार आम्दानी गर्ने उनीहरूको सदरमुकाममा हुने विशेष कार्यक्रमहरूमा भने कमाइ पनि बढ्ने गर्दछ । कार्यक्रम पर्दा त दैनिक २ हजारदेखि ५ हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको व्यवसायी श्रवण रजकले बताए । ‘रिजर्भ गरेर सदरमुकाम बाहिर जानु पर्दा अतिरिक्त कमाइ हुन्छ’ –रजकले भने ।
नगरपालिकामा अटो भित्रिएसँगै नगरवासीलाई आवत–जावतमा निकै सहज भएको छ । व्यक्तिगत सवारी साधन नहुनेहरूका लागि अटोले निकै सहयोग पु¥याएको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं.६ का प्रदीप साहले बताए ।
भूमिराज पराजुली दमक/ दमक–६ की खुर्सिदा खातुन ...
सरिता गिरीको सांसद् ...
धरान/ समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीको सांसद् पद ग ...
कोभिड–१९ ले मस्तिष्क ...
धरान/कोरोना भाइरस हावामार्फत् पनि सर्ने पछिल्लो तथ्य सा ...
फछ्र्यौट नभएका पेस्क ...
कसैलाई कुनै काम गर्न लगाउँदा वा कुनै वस्तु किन्न निश्चय ...
सप्तकोशीमा पानीको बह ...
टोल टोलमा शिक्षक ...
पूर्वी नाकाबाट रजनीग ...
भारतीय न्युज च्यानलह ...
धरानमा मास्क नलगाई ह ...